सामान उचाल्ने यंत्र हात कार: प्रकार र लाभ
अक्सर, एसयूवी मालिक मात्र आफ्नो फलाम प्रत्येक पूर्णतया prosyadet को माटोको मा "पेट" पछि सामान उचाल्ने यंत्र खरीद बारे सोच हो। निस्सन्देह,-सडक बन्द - धेरै खतरनाक कुरा हो, त्यसैले तपाईं "बन्द सीमा" जाने अघि, तपाईं ध्यान दिएर यो यात्रा आफ्नो कार लागि तयार गर्न आवश्यक छ। र मात्र आफ्नो एसयूवी, तिनीहरूले भन्न रूपमा, तपाईं त केवल उहाँले प्राप्त सिमसार पानीको सानो खाडल रूपमा निकटतम गहिरो मा फँस छैन भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ "दाँत गर्न" सुसज्जित गरिनेछ। आज हामी राम्रो हात सामान उचाल्ने यंत्र कार के छ र के यो बिजुली उच्च छ कुरा हुनेछ।
किन बिजुली छैन?
धेरै मालिकहरूले विकल्प हाते एकाइहरूको पक्षमा छ बनाउन। किन? आखिर, यी उपकरणहरू कार मार्गदर्शन सामान उचाल्ने यंत्र भन्दा धेरै फलदायी छन्। समीक्षा मोटर चालकहरुलाई उपकरण यस प्रकारको को सञ्चालन ब्याट्री धेरै नालियों कि दावी र मूल्य त पहुँच छैन - बारे एक हजार यूरो। यसबाहेक, बिजुली winches कार एकदम भारी अगाडि र यो सबै भन्दा राम्रो तरिका प्रभावित गर्दछ क्रस-उपयोगिता वाहन छ।
क्षणमा, त्यहाँ हात ओटोमोबाइल hoists, अर्थात् दुई मुख्य प्रकार हो:
उपकरणहरू को पहिलो प्रकार मर्मत समयमा कार्गो सार्न, तर दुई-टन कार पुल, उहाँले राम्रो सक्छन् सबैभन्दा भाग लागि हो। लीवर उपकरणहरू को मुख्य लाभ आफ्नो कम वजन र संकुचित आकार हो। तिनीहरूले ट्रंक मा लाग्न सानो ठाउँ भन्ने तथ्यलाई - शिकार, माछा मार्ने र बस यात्री को प्रशंसक लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्लस। साथै, सामान उचाल्ने यंत्र मोटर वाहन मार्गदर्शन लीवर प्रकार असर सतह मा एक कठोर बन्धन बिना सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै सबै मौसम अवस्थामा सबैभन्दा टाढाको ठाउँमा यस्तो उपकरण सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। यो पनि यस्तो मिसिन हुन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ थप प्रदान विभिन्न आकार, एकदम उपकरणको कर्षण बढ्छ जो दूरबीन हतियार। आवश्यक छ भने, मार्गदर्शन सामान उचाल्ने यंत्र कार धेरै मीटर को एक केबल संग आपूर्ति गर्न सकिन्छ, तर यो थप लाइनहरु को प्रयोग आवश्यक हुनेछ।
सामान उचाल्ने यंत्र यस प्रकारको सबैभन्दा सरल उपकरण र सञ्चालनको सिद्धान्त हो। यस संयन्त्र को डिजाइन धेरै बेयरिंग, toothed ड्रम, डोरी, छाला र, वास्तवमा, यी उपकरणहरू तय गर्दै छन् मामला समावेश छ। यो प्रविधिको प्रयोग मार्फत कम्तिमा 1.5-2 पटक को कर्षण बढाउन सक्छ। तर, यो मोटर चालकहरुलाई त यो धेरै विरलै प्रयोग गरिन्छ, केवल मानव विकास उचाइ मा लागू गर्न सकिन्छ।
मोटर हात winches: उपकरणहरू को मूल्य
संस्करण र मोडेल आधारमा, 12हजार rubles देखि - यांत्रिक सामान उचाल्ने यंत्र कार आफ्नो बिजुली समकक्षों भन्दा पर्याप्त लोकतान्त्रिक मूल्य छ।
संघनक बयलर: लाभ
को वेंट हटाउने बिना निष्कर्ष: फोटो, समीक्षा
पुरानो उपकरण जहाँ आत्मसमर्पण गर्न? पुरानो मास्को मा, सेन्ट पीटर्सबर्ग मा उपकरण जहाँ आत्मसमर्पण गर्न?
उपकरणको प्रकार, को आउटलेट र standart को क्षेत्रीय आकार
Carbine "बँदेल शिकारी": विवरण र समीक्षा
कफी ककटेल पढें। कफी liqueur संग ककटेल
वर्गीकरणका - शब्द को यो अर्थ .... प्रकार वर्गीकरणका
Autism स्पेक्ट्रम बच्चाहरु। Autism स्पेक्ट्रम विकार
Pushkin (पूर्व Tsarskoye Selo) को शहर मा रत्न सार्वभौम गरेको च्याम्बर: विवरण, इतिहास
टैटू को नतिजा। गोदना भन्दा खतरनाक? टाटु को अनुचित हेरविचार को नतिजा
अनुहार मा स्थलहरू
जिन्स प्यान्ट मा मूल प्याच आफ्नो नयाँ जीवन दिन
दुई-बेडरूम ख्रुश्चेव को पुन: योजना
बैंक ऋण संग सम्झौता कसरी समाप्त गर्न। कानुनी मुद्दा